Madaxtooyada oo iska fogeysay hadal ka soo yeeray xubin ka tirsanaa guddiga wadahadalada Somaliya iyo Somaliland – Hornafrik Media Network
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa iska fogeysay hadal kasoo baxay Jeneral Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen (Guulwade), oo uu ku sheegay inuu sax ahaa duulaankii dowladdii kacaanku ay ku qaaday gobolada Waqooyi ee hadda la yiraahdo Somaliland, kaasi oo shacab badan lagu laayey.
Jen. Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Guulwade ayaa ka mid ah guddiga uu magacaabay Madaxweyne Farmaajo ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
Hase yeeshee qoraal kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in Danjire Cabdiraxmaan Guulwade uu iska casilay xubinnimadii guddiga Qaran ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadallada dowladda federaalka iyo Somaliland.
“Hadalka uu warbaahinta siiyay Danjire Guulwade waa mid kafog waaqaca aan maanta ku nool nahay, wuxuuna dhaawacayaa wadahadallada haatan loo gogol xaarayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoobay, dibna loogu yagleelayo dowladnimo Soomaaliyeed oo loo dhanyahay.” Ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada.
Galmudug: Ahlu-Sunna oo soo saartay jadwal kale oo doorasho